Iindlela ezimbini zokupakisha ze-chip inductors
Abangenisi be-SMD, abakwabizwa ngokuba yi-SMD inductors okanye i-SMD inductors, bakwimo yolwakhiwo lwe-inductance, edlala ikakhulu indima yokukrwitsha, ukudibanisa, ukuhluza, ukulungelelanisa kunye nokulibaziseka kwisekethe. I-Chip inductors ziyolule ixesha lokuphila kweemveliso ezininzi zabathengi kunye nokuphucula ...
Inductors enye, uphuhliso inductors enye-sifuba
Ngokuphuhliswa kweshishini le-elektroniki, iimveliso zombane ziqalisile ukubonisa imeko yophuhliso "lwezinto ezine zala maxesha", ezizezi miniaturization, indibaniselwano, imisebenzi emininzi kunye namandla amakhulu. Ukuthobela ukwandiswa kweemveliso ze-elektroniki, i-electron ...
Umahluko phakathi kwesiqwenga se-inductors kunye ne-inductors eziqhelekileyo
Ngophuhliso lwezenzululwazi kunye netekhnoloji, izixhobo kwiinkalo ezininzi zenziwe. Ukugcina ulungelelwaniso oluzinzileyo lweesekethe zangoku ngokwamandla, imboni ye-elektroniki ifuna iimveliso zokunyanzeliswa ezincinci ezincinci, ngamandla aphezulu, ngexabiso eliphantsi, kwaye zilungele inte ...
Uyisombulula njani ingxaki yengxolo engaqhelekanga ebangelwe kukungeniswa kwe-chip
ngomphathi ku 21-08-25
Ukuba i-chip inductor inengxolo engaqhelekanga ngexesha lokusebenza kwezixhobo, siyintoni isizathu? Ungayisombulula njani? Luthini uhlalutyo olwenziwe ngumhleli weXinchenyang Electronics apha ngezantsi? Ngexesha lokusebenza, ngenxa yemagnetostriction ye-chip inductor, iya kukhupha ingxolo engaqhelekanga nge ...
Iimpendulo kwimibuzo malunga neshelf life ye-chip inductors kunye nefuthe lezinto
Phantse wonke umntu kolu shishino uyabazi ubomi beshelufu ye-chip inductors, zihlala malunga nonyaka omnye, kodwa oku akunjalo. Kuxhomekeka kwinkqubo yemveliso kunye nokugcinwa kwendalo ye-inductor, kunye neetshipsi eziveliswa ngezinto ezingabalulekanga kwaye zibekwe kwindawo efumileyo Ubomi be ...
Imowudi yokunyanzeliswa kwesenzo esiqhelekileyo kwisiphelo segalelo semodyuli yamandla
ngomphathi ku 21-08-16
Imowudi eqhelekileyo ye-inductor ithetha ukuba iikhoyili ezimbini zinenxeba kwisiseko esifanayo sentsimbi, kunye nokujija okungafaniyo, inani lokujika kunye nenqanaba elifanayo. Isiqhelo esetyenziselwa ukutshintshela unikezelo lwamandla ukucoca imiqondiso yokuphazamiseka kwendlela eqhelekileyo, iifilitha ze-EMI zisetyenziselwa ukucinezela amaza ombane ...
Uhlalutyo lwezinto ekufuneka zihlawulwe xa kukhethwa i-chip inductors
Xa sikhetha imveliso, sihlala sikhetha ngokwangaphandle. Kukwanjalo nakwabasebenza nge-chip. Kufuneka siqwalasele izinto zangaphandle okanye zangaphakathi ukukhetha i-chip inductor efanelekileyo kuthi, echaphazela i-chip. Zininzi izinto ezinokubangela ukuba imveliso ...
/ Ukwahlula njani i-inductor ekhuselekileyo kunye ne-inductor engakhuselwanga?
Ndiyakholelwa ukuba abantu abaninzi bayabhideka malunga nokuthelekiswa kwe-inductor ekhuselweyo kunye ne-inductor engakhuselwanga. Ngokwomahluko wokusebenza kokukhusela ngemagneti, kukho amagama amabini ahlukeneyo e-inductor ekhuselweyo kunye ne-inductor engakhuselwanga. I-inductor ekhuselweyo ibandakanya i-chip inductor kunye ne-I-shaped in ...
Umsebenzi we-chip inductors
1. I-chip inductors zizinto ezenziwa ngozibuthe kunye neengcingo ezifakelweyo, ezizezinye zezinto ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo. 2. Umsebenzi we-chip inductor: Umsebenzi wokumelana ne-DC kunye ne-AC ikakhulu kukuzahlula imiqondiso ye-AC, kwaye kwangaxeshanye yenza isekethe enesandi ...
Umahluko phakathi kwe-manganese-zinc kunye ne-nickel-zinc ye-ferrite inductors
I-inderrance yentsimbi ye-Ferrite yokwahlulahlula ibe yiringi ye-manganese-zinc ferrite kunye ne-nickel-zinc ferrite ring. Kuxhomekeke kwizinto ezisetyenzisiweyo, izinto ezibalisiweyo zahlukile. I-nickel-zinc ferrite iringi yamagnetic ikakhulu yenziwe ngentsimbi, i-nickel, kunye ne-zinc oxides okanye iityiwa, kwaye yenziwa ngumbane ...
Indima yokufaka indandatho yemagnethi
Isangqa semagneti somenzi wemagneti inductor umenzi kunye nentambo yokuqhagamshela yenza i-inductor (ucingo olukwintambo lwenzakalisiwe kwisangqa semagnethi njengekhoyili yokuhambisa). Yinto esetyenziswa rhoqo ekuchaseni ukuphazamiseka kwimijikelezo ye-elektroniki kwaye ilungile kwingxolo ephezulu yokuhamba. Um ...
I-ferrite rob iya kuba neempawu ezahlukeneyo zokuphambuka kwiindawo ezahlukeneyo
Ukuphanga ngemagnethi kuneempawu ezahlukeneyo zokuphambuka kwiindawo ezahlukeneyo. Ngokubanzi, i-impedance incinci kakhulu kwii-frequencies eziphantsi, kwaye i-impedance iphakama ngokukhawuleza kwiindawo eziphezulu. Ukunyuka kwesantya somqondiso, kokukhona kulula ukuba umazibuthe uphume. Ngokubanzi, signa ...